ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္သီးသန္႔က႑ၿမန္မာဘာသာ-ၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္ကပ္ေရာဂါအဆုတ္ေရာင္ (COVID-19 အတိုေကာက္ဝူဟန္႔ အဆုတ္ေရာင္) ဇုန္-လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို6လ30ရက္အထိထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္သည္။ (C/5-15)
ထုိင္ဝမ္သည္ေဒသတြင္း COVID-19ကူးစက္ေရာဂါမ်ားဆက္လက္တိုးၿမွင္႔လာသည္နွင္႔အမွ် အၾကီးစားကူးစက္ေရာဂါအဆင္႔သို႔ေရာက္ရိွေနသည္ဟုသံုးသပ္၍ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈ ဌာနကယေန႔30ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊စီးပြားေရးနွင္႔လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္ၿပည္တြင္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္နွင္႔ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကိုထိန္းသိမ္း၍ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနကိုက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္လက္ရိွမတ္စ္ခ္မ်ားတပ္ၿခင္းကဲ႔သို႔ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို(2022)ခုနွစ္6လ30ရက္ေန႔အထိထိန္းသိမ္းထားသည္၊သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။：
I. ၂။ လက်ရှိmaskတပ်ဆင်သည့်စည်းကမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါ၊ အချို့သောအချိန်များတွင် maskများမလိုအပ်သည်မှလွဲ၍(အောက်ပါဇယားတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) နှင့် အပြင်သွားသည့်အခါတိုင်း maskကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။
(၁) သီချင်းဆိုတဲ့အခါ Mask တပ်ထားပါ။
1.၁။ အဆောက်အဦးအတွင်း သို့မဟုတ်အဆောက်အဦးအပြင်၌လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေချိန်
2.၂။အဆောက်အဦးတွင်း သို့မဟုတ်အဆောက်အဦးအပြင်၌ တစ်ဦးချင်း/အဖွဲ့လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်နေချိန်
3.၃။ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းသောအခါ၊ ကားပေါ်တွင်မိသားစုဝင်များရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် ကားပေါ်၌လူမရှိသည့်အခါ
4.၄။တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု၊အနောင်စာအလုပ်၊ သတင်းထုတ်လွှင့်မှု၊ မိန့်ခွန်းပြောခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ၊စားသင်ကြားမှုစသည်ဖြင့် စကားပြောဆိုမှုဆိုင်ရာ အလုပ် သို့မဟုတ် လ တရားဝင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု ပြုလုပ်သည့်ကာလအတွင်း။
5.၅။စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ ရေထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး လုပ်သားများ (လယ်ကွင်း၊ ငါးကန်၊ တောင်နှင့် သစ်တောများ) စသည့်နေရာများတွင် လုပ်သောအလုပ်။
6.၆။ သစ်တောများ (တောင်ပေါ်အပန်းဖြေနေရာများအပါအဝင်) နှင့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်လှုပ်ရှားမှုများ
7.ရ။ရေပူစမ်း/ရေအေးစမ်းများ၊ အပူဓါတ်ဖြင့်ချွေးထုတ်သောအခန်းများ၊ ရေspa၊စော်နာခန်း(ရေပူရေနွေးရေအေးသုံးမျိုးသုံးလို့ရသောရေပူစမ်းများ)၊ ရေနွေးငွေ့ဖြင့်ချွေးထုတ်သောအခန်းများ၊ ရေကစားခြင်းစသည့် maskကို စိုစွတ်လွယ်သည့်နေရာများ
(၃) အပြင်ထွက်နေချိန် စားသောက်သောအခါ Mask တပ်စရာမလိုအပ်ပါ။
(၄) ရောဂါကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုများတွင် (ဥပမာ- အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲများ/ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့များ/တီဗီသတင်းထုတ်လွှင့်မှုများကဲ့စသည့်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည့်နေရာများ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်နေသည့်အားကစားသမားများနှင့် ဒိုင်လူကြီးများ ပြိုင်ပွဲဝင်နေချိန်) ရောဂါကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့်စီးကမ်းများသင့်လျော်ပါကMaskကိုခေတ္တခဏဖယ်ရှားနိုင်သည်။
II. ၃။လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်) တို့တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုစည်းကမ်းရှိစွာလိုက်နာသင့်သည်- ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးကိုအရေးထားခြင်းနှင့် ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိပါက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောအရာများကိုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ၊၊
III. ၄။ စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စျေးရုံများ- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်များ/အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ၏ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအစီအမံများကိုလိုက်နာပါ။ သီးသန့်ထိန်းချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ အမြည်းစားခွင့်ရှိသည်။
IV. ၅။ ကျည်ဆံရထား၊ မီးရထား၊ အဝေးပြေးကားများ၊ သင်္ဘောများ (ထမင်းစားခန်းများမှလွဲ၍) ပြည်တွင်းခရီးစဥ်များ- (ရထား၊ သင်္ဘော၊ လေယာဉ်) တို့တွင် အစားအစာသုံးဆွဲနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
V.  ၆။ စားသောက်ဆိုင်များ- ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာမှုကို တင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်ပါ၊ လက်ဆေးရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများပေးဆောင်ပါ၊ ညစာစားပွဲများတွင် စားပွဲတစ်ခုချင်းဆီ သို့လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခွင့်မပြုပါ။ အထက်ပါစည်းမျဥ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတွင်း ၌စည်းမျဥ်းများနှင့် သင့်လျော်အောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကဆိုင်တွင်း၌စားသောက်ခွင့်မပြုပါ။
VI. ရ။ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ ဘာသာရေးစုရုံးမှုများ- ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အစီအမံများနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။
ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးသည်လူသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ညွှန်ကြားရေးဌာနမှ ပန်ကြားထားပြီး ပြည်သူများ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး အလေ့အထကို လေ့ကျင့်ပါ၊ Maskများ တပ်ဆင်ပါ၊ လက်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါန၊ လူလူခြင်းလုံခြုံသောအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ ရောက်သည့်နေရာတိုင်းတွင်အပူချိန်တိုင်းပါ။ ""Taiwan Social Distancing APP" ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုပါ ၊ဤနည်းလမ်းများဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်နှင့် အခြား ပြည်သူပြည်သားများ၏ ဘေးကင်းမှုကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းပါဟု ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက် update ကို：2022-06-06 20:48